Kyaw Htet Aung/ National Cheng Kung University - 新南向人才培育計畫
Kyaw Htet Aung/ National Cheng Kung University
Major : Master Program in Political Economy
My name is Kyaw Htet Aung and I am from Myanmar. I hold the bachelor degree in materials and metallurgical engineering from the University of Technology (Yatanarpon Cyber City), which is one of the leading universities in Myanmar. After that, I finished my post graduate diploma in Political Science and Public Policy at the Myanmar Institute of Politics and Public Policy (MIPP), which is the think-tank organization based in Yangon, Myanmar. I used to work as the program officer in the non-profit sectors at Yangon, Myanmar. I am currently doing my master degree in political economy by specializing the International Political Economy (IPE) at National Cheng Kung University, Tainan City, Taiwan.
ကျွန်တော့်နာမည်ကတော့ ကျော်ထက်အောင်လို့ခေါ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က မြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ လာရောက်ပြီး ထိုင်ဝမ်မှာ ပညာသင်ကြားနေတဲ့ ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံက ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ရတနာပုံဆိုင်ဘာစီးတီး) ကနေပြီးတော့ သတ္တုနှင့်သတ္တုဗေဒ အထူးပြုနဲ့ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်ရဲ့ ဘွဲ့ကြိုဒီဂရီပြီးဆုံးသွားပြီး တဲ့အခါ ကျွန်တော်ဟာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးနှင့်မူဝါဒရေးရာလေ့လာရေးသိပ္ပံ မှာ တက်ရောက်လေ့လာခဲ့ပြီး နိုင်ငံရေးနှင့်မူဝါဒရေးရာလေ့လာရေး ဒီပလိုမာကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ အကျိုးမမြတ်မယူတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကျား/မရေးရာလေ့လာရေးသိပ္ပံ မှာ စီမံကိန်းအရာရှိအဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အခု ကျွန်တော်ဟာ ထိုင်ဝမ်၊ တိုင်နန် မြို့မှာ ရှိတဲ့ ချိန်ကွန်းအမျိုးသားတက္ကသိုလ်ရဲ့ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံဌာနမှာ နိုင်ငံရေးဘောဂဗေဒ ဘာသာရပ်အတွက် နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရေးဘောဂဗေဒ ကို အထူးပြုလေ့လာနေတဲ့ ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
Firstly, the courses of master degree in political economy at National Cheng Kung University (NCKU) really attract me to study in Taiwan. And then, the quality of education also encourage me for making the decision to study here. I am very interesting on the East Asia politics, and East Asia Economic Development micracle along the history. Therefore, I supposed that Taiwan is one of the best places to study the East Asia Politics in that region and I just want to know in depth the Taiwan’s economic development story. Therefore, I made the decision to study in Taiwan for my master degree. And then, offering the two-semester free Mandarin courses for international student in NCKU also became part of my decision making to study here. I think that it is the great benefit for international student who are studying in Taiwan.
ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ ချိန်ကွန်းအမျိုးသားတက္ကသိုလ်ရဲ့ နိုင်ငံရေးဘောဂဗေဒ မဟာဘွဲ့က သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွေဟာ ကျွန်တော့်ကို အင်မတန်မှ ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ ထိုင်ဝမ်ရဲ့ နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ပညာရေးစနစ်ဟာလည်း ကျွန်တော်ကို ထိုင်ဝမ်မှာ ကျောင်းတက်ဖြစ်စေဖို့အတွက် အဓိက တွန်းအားပေးတဲ့ အချက်တစ်ခု အနေနဲ့လည်း ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကျွန်တော့်အနေဖြင့် အရှေ့အာရှနိုင်ငံများရဲ့ နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်များနှင့် သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ စီးပွားရေးဖွံဖြိုးတိုးတက်မှု ဖြစ်စဉ်များကို အင်မတန်မှ စိတ်ဝင်စားခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ထိုင်ဝမ်ဟာ ဒီဟာတွေကို လေ့လာဖို့ အတွက် အကောင်းဆုံး နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကို လက်ခံခဲ့ပြီး ထိုင်ဝမ်ကျွန်းရဲ့ စီးပွားရေး ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှု အကြောင်းအရာကို လေ့လာဖို့ အရမ်းအာသီသဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လိုလည်း ထိုင်ဝမ်မှာ မဟာဘွဲ့တက်ရောက်ဖို့ အတွက် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါအပြင် ချိန်ကွန်းတက္ကသိုလ်ကနေပြီးတော့ နိုင်ငံတကာကျောင်းသားတွေအတွက် စာသင်နှစ်တစ်နှစ်စာ အခမဲ့ မန်းဒရင်းအတန်းများကိုပါ တက်ရောက်ခွင့် ပေးထားခြင်းဟာလည်း ကျွန်တော့ရဲ့ ထိုင်ဝမ်မှာ မဟာဘွဲ့တက်ရောက်ဖို့ အိမ်မက်ကို ပိုပြီးခိုင်မာလာစေခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ ထိုင်ဝမ်မှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ နိုင်ငံတကာ ကျောင်းသားတွေအတွက် အရမ်းကို ကောင်းမွန်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်စေတယ်လို့ ယုံကြည်မိပါတယ်။
Generally, the nature of political economy is studying about the phenomenon of interaction between the politics and the economy, means the state and the market. And then, it composed of another area of subjects, such as International Relations, Global Economy, Sociology, Public Policy, etc. In NCKU, the program classified into the three sub-sectors, called the Political Economy of Institution & Policy, Political economy of Governance & Development and Political Economy of Global & Regional. Among them, I specialized the third sector, related with the International Political Economy (IPE). What I have enjoyed most in my studies are that the professors always gave the different perceptions and comprehensive approaches in the class discussion, and all of the conversation points in the related subjects are the Asia-centric perceptive. Therefore, these are quite useful and enjoyable for me.
ယေဘူယျ အားဖြင့်ုနိုင်ငံရေးဘောဂဗေဒဘာသာရပ်ရဲ့ အခြေခံသဘောမှာ နိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးကြားက ဆက်စပ်မှုကို အခြေခံပြီး လေ့လာရတဲ့ ဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံတော် နဲ့ ဈေးကွက် အကြားက အဆက်အစပ်ကို အထူးပြုထားပြီး လေ့လာခြင်းလို့ ဆိုလိုလို့ရပါတယ်။ ဒါအပြင် ဒီဘာသာရပ်ထဲမှာ တခြားသော ဘာသာရပ်များဖြစ်ကြတဲ့ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး၊ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး၊ လူမှုဗေဒ၊ မူဝါဒရေးရာလေ့လာရေး အစရှိတဲ့ ဘာသာရပ်များလည်း နှီးနှောပါဝင်လျှက် ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တက်ရောက်နေတဲ့ ချိန်ကွန်းအမျိုးသားတက္ကသိုလ်မှာဆိုရင်တော့ နိုင်ငံရေးဘောဂဗေဒ မဟာဘွဲဒီဂရီး မှာ အထူးပြုဘာသာရပ်နယ်ပယ် (၃) ပိုင်းခွဲခြားထားပါတယ်။ အင်စတီကျူးရှင်းများရဲ့နိုင်ငံရေးဘောဂဗေဒဖြစ်စဉ်နှင့်မူဝါဒရေးရာ၊ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးဘောဂဗေနှင့် ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှု၊ နှင့် ကမ္ဘာလုံးချီ(သို့)ဒေသဆိုင်ရာ နိုင်ငံရေးဘောဂဗေဒ ဆိုပြီးတော့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ တတိယနယ်ပယ်ထဲက နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရေးဘောဂဗေဒ ဘာသာရပ်ကို အထူးပြုဘာသာရပ်အနေနဲ့ လေ့လာနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အတန်းထဲမှာ ပရော်ဖက်ဆာများက သီအိုရီများအပြင် တကယ့်လက်တွေ့နယ်ပယ်ထဲက အကြောင်းအရာများ၊ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးအခြေအနေများကိုပါ ချိတ်ဆက် သင်ကြားပေ့သောကြောင့် အင်မတန်မှကို ကျေနပ်မိပါတယ်။ ဒါအပြင် သင်ကြားသော အကြောင်းအရာများမှာ အာရှနိုင်ငံများ အတွက် ဗဟိုထားပြီးသင်ကြားပေးသောကြောင့် ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဒါတွေဟာ ပိုမိုပြီး အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေတာကိုလည်း ယုံကြည်မိပါတယ်။
Most of the classes in Taiwan for master degree are the seminar types and discussion oriented approach. It is totally different with the teaching style in my country. And then, all of the professors have the strong academic background and concrete teaching experiences. I truly love that kind of teaching methods and believe that studying here makes me stronger and more confidence than before I study in Taiwan. And then, another different things with my country are the quality of infrastructure in every single procedures of the university, such as enrollment, library, classrooms, etc. because Taiwan is the high income and already developed country. Moreover, most of the universities in Taiwan are really care about the green spaces in the University campus and the university really supports to the students for participating the sport, the cultural events, art, and other activities. I think that kind of atmosphere is quite different with my previous studies experience in my life-time.
ထိုင်ဝမ်ရဲ့မဟာဘွဲအတွက် သင်ကြားမှုပုံစံတွေဟာ တက္ကသိုလ်တိုင်းမှာ ညှိုနှိုင်းဖလှယ်တဲ့ပုံစံနဲ့ ဆွေးနွေးပြီးသင်ကြားတဲ့ ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့သင်ကြားလာခဲ့ရတဲ့ ပုံစံနဲ့ တော်တော်လေးကို ကွဲပြားနေခဲ့ပါတယ်။ ဒါအပြင် သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်အလိုက် သင်ကြားပေးတဲ့ ပရော်ဖက်ဆာ တွေရဲ့ အတွေးအခေါ်နဲ့ အတွေ့အကြုံများကလည်း ကျောင်းသားများအတွက် အရမ်းကို အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်ထွန်းပါတယ်။ ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်း အခုလို သင်ကြားတဲ့ ပုံစံကို သဘောကျနှစ်သက်မိသည့်အပြင် ကိုယ်ဘာသာကိုယ်လည်း ယုံကြည်မှုတွေ ပိုမိုရှိလာစေတယ်လိုလည်း ထင်မိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ထိုင်ဝမ်မှာ ရှိတဲ့ တက္ကသိုလ်တွေရဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေနဲ့ ပုံစံတွေဟာ မြန်မာပြည်က တက္ကသိုလ်တွေနဲ့ အရမ်းကို ကွဲပြားလှပါတယ်။ ဒီမှာ ရှိတဲ့ တက္ကသိုလ်အများစုမှာ ကြီးမားပြီး စိမ်းစိုလန်းဆန်းနေတဲ့ ကျောင်းခြံဝန်များကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြပြီး တက္ကသိုလ်နေနဲ့လည်း ကျောင်းသားများကို အားကစားနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ပံ့ပိုးမှုကို အဓိကထားပြီး လုပ်ပေးကြပါတယ်။ ဒါအပြင် မတူကွဲပြားတွေ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာပွဲတော်များ၊ အစားအသောက်နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ပြပွဲများ စသည်ဖြင့် လုပ်ပေးတွက် အတွက်ကြောင့်လည်း ကျောင်းသား/သူများအတွက် တခြားသော ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေကို တစ်ပြိုင်တည်းမှာ လေ့လာဖို့ အခွင့်အရေးရရှိစေနိုင်ပါတယ်။
As for me, the biggest challenge for applying to study in Taiwan was for the Visa application in my country. The requirements of the Taiwan student Visa isalittle bit different with the other countries. That made me so depress at that time, and took foralong-time to get the student Visa. But, I got it by trying again and again to full-fill the requirement of the Visa application.
ထိုင်ဝမ်မှာ ပညာသင်ကြားဖို့အတွက် စတင်ပြီး ပြုလုပ်ရတဲ့ အခက်အခဲတွေကထဲက ကျွန်တော့်အတွက်ကတော့ ကျောင်းသားဗီဇာ ရဖို့အတွက် လုပ်ရတဲ့ အခက်အခဲကတော့ အကြီးဆုံးပါပဲ။ ထိုင်ဝမ်ကျောင်းသားဗီဇာ ရဲ့ လိုအပ်တဲ့ အချက်အလက်တွေဟာ တခြားသော နိုင်ငံတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ မတူညီတဲ့အတွက် တော်တော်လေးကို အဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အချိန်ပေးပြီး ကြိုးစားလျှောက်ခဲ့တဲ့အတွက် နောက်ဆုံးမှာ ရရှိခဲ့ပါတယ်။
I will come back to my country after my master degree here because I want to contribute my knowledge and expertise I studied here for my country. But, If I will have the chance to do some internship program in Taiwan after my degree, I hope that I will join with that kind of amazing programs in Taiwan. Myanmar is stilladeveloping country in the regional content. Therefore, I want to be the change agent for economic development in Myanmar. I really do believe that the experience of studying in Taiwan will be very useful for my future career plan.
ကျွန်တော့်အနေနဲ့ကတော့ ကျောင်းပြီးရင် မြန်မာပြည်ကို ပြန်ဖြစ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီမှာ သင်ကြားခဲ့ရတဲ့ ပညာရပ်တွေကို ကိုယ့်ရဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်ပြန်ပြီး အသုံးချချင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါအပြင် ကျောင်းပြီးလို့ ထိုင်ဝမ်မှာ အလုပ်သင်အခွင့်အရေးများရခဲ့လို့ရှိရင်လည်း အချိန်အနည်းငယ်ပေးပြီး အလုပ်သင် အတွေ့အကြုံရဖို့လည်း မျှော်လင့်မိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဒေသတွင်းမှာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဆဲ နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သော
ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှာ အုပ်တစ်ချပ်၊ သဲတစ်ပွင့်အနေနဲ့ ပါဝင်နိုင်ဖို့ကိုလည်း မျှော်လင့်မိပါတယ်။ ထိုင်ဝမ်မှာ သင်ကြားလာခဲ့တဲ့ ပညာရပ်တွေဟာ ကျွန်တော်ရဲ့ အနာဂတ်အတွက် အရမ်းကို အထောက်အကူပြုမယ်
I am very sure that studying in Taiwan can benefitalot for me, especially for my future career plans. As I mentioned earlier, the courses in Taiwan are Asia centric and critical oriented approach. Therefore, I am very confident to say that the studying experiences in Taiwan teach me how to achieve my career in the competitive globalized world and how to prepare for the future challenging. And then, the reputation of Taiwan’s education opens the many doors for my job opportunities not only in Myanmar but also in regional countries.
ထိုင်ဝမ်မှာ ပညာသင်ကြားခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့ အနာဂတ် အတွက် တကယ်ကို အကျိုးဖြစ်ထွန်း
မယ်ဆိုတာကို ယုံကြည်မိပါတယ်။ ထိုင်ဝမ်ရဲ့ သင်ကြားမှု ပုံစံတွေနဲ့ သင်ခန်းစာတွေဟာ ယခုလို အပြိုင်အဆိုင်များ
ပြားလွန်းတဲ့ ကမ္ဘာကြီးမှာ ကျွန်ုပ်တို့ကို ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ဘဝတစ်ခုဆီကို ယူဆောင်သွားနိုင်တယ်လိုလည်း ခံယူမိပါတယ်။ ဒါအပြင် ထိုင်ဝမ်ရဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ပညာရေးစနစ်ဟာ ကျွန်တော့်အတွက် မြောက်များစွာသော အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းအသစ်တွေကို ဖန်တီးပေးနိုင်မှာ သေချာပါတယ်။
Studying in foreign country as the student who got the scholarship is very challenging for every student because we need to maintain the high grading, and the top ranking of the academic performance in the class. On the other hand, I do believe that that kind of challenging really transforms us to be the stronger person. In my experience, there are two key achievements during my studies in Taiwan. For the first one, my academic performance is getting more and more diligent in every aspects, such as critical analysis, strong theoretical knowledge, and seeking the social phenomenon. And then, another achievement is the management skill because I need to finish the designated assignments in limited time. Therefore, that kind of experience teaches me how to work smart to finish under the pressure. I think that the studying experience in Taiwan trains me to the professional one.
တခြားသော နိုင်ငံရပ်ခြားတစ်ခုမှာ ပညာသင်ဆုအစီအစဉ်နဲ့ ကျောင်းတက်ရတဲ့ ကျောင်းသားတစ်ယောက်ရဲ့ အခက်အခဲတွေက များပြားလွန်းလှပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ပညာသင်ဆုရဲ့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ စံချိန်စံနှုန်းတွေ
ကို အမြဲတမ်းထိန်းသိမ်းထားရလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ တဖက်မှာလည်း ဒီလိုမျိုး စိန်ခေါ်မှုတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ကို ပိုပြီး ကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အတွေ့အကြုံအရပြောရရင်.. ကျွန်တော်ထိုင်ဝမ်မှာ ကျောင်းတက်နေတဲ့ အချိန်မှာ အဓိကအားဖြင့် အောင်မြင်မှုနှစ်ခုကို တွေ့ရပါတယ်။ ပထမတစ်ခုကတော့ ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သိမှု ပိုမိုအားကောင်းလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဝေဖန်ဆန်းစစ်မှုစွမ်းရည်၊ သီအိုရီနဲ့ပတ်သတ်သော အသိပညာများ၊ စတဲ့ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ စွမ်းရည်များပိုမိုပြီး ရရှိလာပါတယ်။ နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ စီမံခန့်ခွဲ့မှု စွမ်းရည်ဖြစ်ပါတယ်။ အတန်းတွေတက်ရတဲ့ အခါမှာ သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်အလိုက် လုပ်ရတဲ့ အိမ်စာများ၊ သင်ခန်းစာများကို သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချိန်အတွင်းမှာ ပြီးအောင်လုပ်ရလေ့ ရှိပါတယ်။ အဲ့လိုပြီးဖို့အတွက်လည်း မိမိရဲ့ အချိန်ကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်မှုဟာ အရေးကြီးလှပါတယ်။ ပြီးတော့ ဖိအားများကို ပိုမိုရင်ဆိုင်နိုင်လာပြီး မိမိကိုယ်ကိုယ်ကိုလည်း ယုံကြည်မှု ပိုမို ရှိလာစေခဲ့ပါတယ်။ အခုလိုမျိုး စွမ်းရည်တွေဟာ ကျွန်တော်ကို ပိုပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်စေတယ်လို့လည်း ခံယူမိပါတယ်။
I really encourage to the prospect foreign students to learn some Chinese language before coming to Taiwan. I am pretty sure that it could be useful not only in academic leaning but also in daily communication for those who want to study in Taiwan. But, Don’t worry too much for language barriers because all of the Taiwanese people are very friendly and kind. And then, I highly recommend to study in Taiwan for various reasons, such as because of the high quality education, location, food, culture, art, and rich history, etc.
ထိုင်ဝမ်မှာ ကျောင်းသား/သူ တွေကို ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အဓိက အကြံပေးချင်တာကတော့ ထိုင်ဝမ်ကို မလာခင်မှာ မန်းဒရင်း (တရုတ်) ဘာသာစကားကို အခြေခံအဖြစ် သင်ကြားစေလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲလိုမျိုး ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီး သင်ကြားလာခြင်းဟာ မိမိတို့လေ့လာတဲ့ ပညာရပ်ဆိုင်ရာမှာ အထောက်အကူဖြစ်စေသည်သာမက နေစဉ်လူမှုဘဝ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာပါ အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။ မန်းဒရင်းကို လေ့လာထားခြင်း မရှိသောသူများအနေ
ဖြင့်လည်း စိုးရိမ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ထိုင်ဝမ်မှာ ပညာသင်ကြားရတဲ့ အတွေ့အကြုံဟာ စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေပြီး မိမိတို့ရဲ့ သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်မှာ ကျွမ်းကျင်စေဖို့အတွက် စနစ်တကျ လေ့ကျင့်ပေးတဲ့ နေရာဖြစ်တယ် ဆိုတာကို ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အခိုင်အမာပြောနိုင်ပါတယ်။